Barri 2010 maal baatee darbe? Isiniif taatee guddaan isa kami? - BBC News Afaan Oromoo
Barri 2010 maal baatee darbe? Isiniif taatee guddaan isa kami?
11 Fuulbana 2018
Barri 2010 taateewwan gurguddoo nama gammachiisanii fi gaddisiisan hedduu keessumeessee xumurameera.
Barri 2010 Oromiyaa keessatti bakkeewwan hundatti mormiin jijjirama siyaasaaf humna qeerroon gaggefamaa ture olaanaa ture.
Lubbuun dargaggota hedduu darbuun, tooftaawwan qabsoo Okkara maleeyyii jedhaman akka daandii cufuu, lagannaa gabaa fi kannen kaanis yerootti akka malee cimanii gaggeefamanii injifannoo galmeesisan ture.
Itoophiyaas tahe Oromiyaa keessatti waggota 27 booda jijjiramootni siyaasaa haaraan yerootti mul'atan, taayitaa qabachuu fi gadhiisuu waliin yerootti dhiphinni gurguddaan mul'ate, Ministirri muummee duraanii osoo hin eegamiin akka taayitaa gadhiisu beeksise, eenyu biyyittii gaggeessa kan jedhu baruunis akka dubartii deessuu yerootti ciniinsuu yeroo dheeraan eegamaa ture tahuun dabarseera.
Bara 2010 keessa maqaan Qeerroo jedhu yeroo kamiyyuu caalaa Oromiyaa bira darbuunSabaa fi Sablammoota biyyittii biro biratti akkasumas akka adunyaatti barameera.
Jijjirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti Qeerroon Oromiyaa sagalee tokkoon mormii fi qabsoo gaggeessee bara injifannoo itti galmeessedha.
Qabsoon Qeerroo naannolee kaaniifis fakkenya tahuun, isaanillee faana dhahuun qabsoo gaggeessaa turaniiru.
'Injifannoon argame aarsaa lammiileen kan dhufeedha'
2 Garee Lammaa / Team Lemma
Bara 2010 haaromsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti jalqaba kan waamamaa ture garee Obbo lamma Magarsaati.
Paartiin biyya bulchu ADWUI bara 2010 yerootti bifa hin baramneen of haaressuuf marii fi mormii keessummeessa ture dha.
As keessatti gareen Lammaa Magarsaa gaggeesitoota Naannoolee kaanii waliin tahuun tokkummaan socho'uun shoora olaanaa bahateera jedhama.
Tokkuummaan Naannoo Amaaraa,Uummatoota Kibbaa fi Naannoo Beenishaangul akkasumas Naannoo Somaalee waliin taasisan ni eeramu.
Humni haaromsa siyaasa biyyittii dhiibbaa fi qabsoo alaan gaggeefamaa tureen cinatti nama jijjiiramaa siyaasa biyyaaf barbaachisa jedhamee, deeggarsa biyya keessaa fi alaan alaan argate Dr Abiy Ahimed fi miiltoowan isaa akka mul'atan taasiseera.
''Of ta'anii argamuu abbaa kiyyarraan baradhe''
Mootummaan Itoophiyaa ABO waliin mari'achuf jila Eertiraatti erge
3 Namoota Bara 2010 Dhiibbaa Uuman [Influential persons]
Itoophiyaa keessa namootni kallattii ogummaa garaagaraan dhiibbaa gurguddaa uuman jiraatanis Oromiyaa irraa namoota muraasa tarreessuuf yaalleera.
Namootni maqaansaanii hin dhahamne hedduun akka jiran beekamaadha.
1. Jawaar Mahaammad: Rogeessa uummata qabsoof dadammaqsaa turee fi OMN hogganu miidiyaalee hawwaasaa irratti bal'inaan qoodamaa tureera.
Quuqamtoonni mirga namoomaa Ministira Muummichaa akkamiin xiinxalu?
Cumboo baaduu barmeela lama fixee simannaa Jawaariif dhiyaate
2 Abiy Ahimed (PhD): Erga taayitaatti bahanii biyya keessaa fi alaan fudhatama guddaa argataniiru.
Onnee Lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane gaggessitoota biyyoota addunyaa keessas galaniiru.
MM Abiy Ahimad guyyoota 100 keessatti garamitti imalan, maal hojjetan?
3. Lammaa Magarsaa: Qondaala jijjiirama siyaasa Itoophiyaa jedhamuun miidiyalee hawwasaa dabalatee kanneen biroo irrattis waamama tureera.
Kanaafis badhaasa nama gumaacha gaarii gumaacheef kennamu [baggoo saw] jedhamu kan bara 2010 fudhataniiru.
4. Hacaaluu Hundeessaa: Artistootni dhiibbaa uuman biyya keessa jiraatanis sirba galma aadaa Oromootti bakka gaggeessitootni jiranitti sirba barana masaraan mootummaa Kiiloo afurii keenya jedhu sirbee booda dudubachiisaa tahee baheera.
5. Kaffaaloo Tafarraa: Namoota mana hidhaa keessaa bahan keessaa bal'inaan maqaansaanii qoodamaa ture keessaa Kaffaaloo Tafarraa Miilasaa lamaan dhabee kan bahe qalbii namoota hedduu galeera.
‘‘Eenyutu Waddeessa eenyutu Jaldeessa?"
Du'uun barbaada ture, du'uu hin dandeenye
Jechootni akka araaraa fi dhiifamaa bara 2010 keessa bal'inaan gurra uummata miiliyonota galaniiru.
1.Araara MM haa taasifnu jedheen bara 2010 keessa waggota 20 booda Itoophiyaa fi Eertiraan nagaa buusaniiru.
2.Gaggeesitootni biyyota lamaanii biyyota lamaanitti Daawwannaa taasisaniiru.
3.Mootummaan Itoophiyaa qaamolee qabsoo hidhannoo gaggeessan kan akka ABO, Ginbot 7 fi ABBO waliin araara buusuun gara biyyaatti akka deebi'aniif taasifamaa tureera.
4.Hidhamtoota siyaasaa fi kanneen biroo kumaatama tahaniif dhiifamni taasifamuun akka gadhiifaman tahaniiru.
MM Dr. Abiy Eertiraa doowwachun seenaa haaraa galmeessan
Pirezidantin Eertiraa Itoophiyaa daawwachuuf
5 Jechoota bara 2010
Akkuma gara taayitaatti dhufaniin MM Dr. Abiy 'Haa ida'amnu' yaada jedhu dubbataa turan.
''Gaafa jiraannu lammii Itoophiyaa, gaafa duunu Itoophiyaa taana,'' kan jedhus yaada namoota hedduu hawwateera.
Dubbiin ''Itoophiyummaan araada [''Itoophiyaawwinet suus new''] jecha Obbo Lammaa Magarsaa ture.
Barri 2010 akkuma jijjiramoota gaarii keessumeesse, wantoota gaddisiisoo keessumeessee darbe keessaas sababa walitti bu'insaan buqqa'insa uummataa uumamedha.
Waggaa kana bara 2010 jalqaba irraa eegalee Oromoonni naannoo Somaalee keessa jiraatan walitti bu'insa uumameen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru.
Akkasumas lammiileen Somaalee hedduus iddoowwan garagaraa naannoo Oromiyaa keessaas buqqa'aniiru.
Akka gabaasa Dhaabbata Mootummota Gamtoomaniitti Oromoonni 800,000 ol tahan qe'eerraa buqqa'anii ture.
Akkasuma uummanni Gujii fi Geedewoo irraa buqqa'an 800,000 ol turan.
Rakkoolee buqqa'iinsi geessisaa jiru
'Qe'ee keenyatti deebi'uuf haalli nageenyaa nu yaaddessa'
Baankiin hojii Gamtaa Jigjigaatti miiliyoona 40 ol ‘saamame’
Waggoota dheeraaf taayitaarra Qondaaltotni mootummaa olaanoo turan keessumaa kan akka Jeneraal Saamooraa Yeenus fi Geetachoo Asaffaa taayitarraa ka'aniiru.
Qondaaltotni olaanoo akka Taakkalee Ummaa fi Xayibaa Hasan faa yeroo muudaman namootni hedduun yaadasaanii karaa miidiyaalee hawwaasaa dabalataan qoodaa turaniiru.
Gama biraan Gabaasni Dhabbata Human Right Watch fi Aminesti Internaashinaal Abdi mohaamad Umar, liyyuu poolisii ajajuun mirga namoomaa sarbaa tureera, ajjesisaa turera jechuun baasaa ture.
Boodas Naannoo Somaalee foxxoqsuuf yaalaa ture jedhamee miidiyaalee hawwaasaan erga odeeffamaa ture Raayyaan Ittisa biyyaa akka naannicha to'atu tahuun Abdii Mahammad Taayitaarra kaafameera.
Pirezedaantotni lama aduu Torban lamaa keessatti muudamaniiru. Amma Musxafaa Umar taayitaatti dhufeera.
Abdii Mohaammad fi Qondaaltotni isa waliin turan shan himanni irrati banamuun mana murtiitti dhiyaatanirru.
Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambi Doollotti haati dahumsaaf deemaa turan ciniinsuu irra osoo jiranii ajjeefamuunsaanii gochaa suukanneessaa ture.
Dhohinsa boombii waxabajji 16 hiriira deeggarsaa Ministera Muummeef bahame irratti uumame, lubbuu namootaa dabarsee fi namoota kaanis madeesse taatee bara 2010 keessaa isa tokko.
Duuti Injiner Simmanyaw Baqqalaa, Hojii gaggeessaa olanaa Hidha Haaromsaa Guddichaa taateewwan bara 2010 uummata dheekkamsiisan keessaa isa biraati.
Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaan raawwataa tureera. Haa tahu malee isaan keessaa guyyaa tokkotti ajjechaa namoota 40 ol irratti Harargee Bahaa Mayyuu Muluqqeetti gaggeefame taateewwan gaddisiisoo bara 2010ti.
Injinar Simmanyaw Baqqala eenyu turan?
'Injinar Simmanyaw ofiin of ajjeesan' poolisii
Namooti sadi ajjechaa Dambi Doolloon shakkaman hidhaman
9 Taateewwan ajaa'ibsiisoo
Ani raajiidha jechuun reeffa nama du'ee awwaalamee guyyota sadii booda nan kaasa jedhee awwala diigsisuun gochaa safuu cabse uummata rifaasise ture.
Jawaar akkuma waadaa gale erga biyya galee miilla qullaa Ambo keessa deemuu
Jawaar Mahaammad miilaan magaalaa Amboo keessa deeme
Lammaa Magarsaa: ''Injifannoon argame kan aarsaa lammiileetiin dhufeedha''
Wal-dhabdee Gujii-Geedi'oo: 'Qe'ee keenyatti deebi'uuf haalli nageenyaa nu yaaddessa'
29 Hagayya 2018
JIgjigaa: Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa magaalaa Jigjigaatti miiliyoona 40 ol ‘saamame’
Viidiyoo Dr. Abiy Ahimad: Imala guyyoota 100
Rakkoolee sababa buqqa'iinsaan mudataa jiran
Kakuu Maammee: Dhadhaa barmeela tokkkoofi baaduu barmeela lama fixe